नायिका श्वेता र विजयन्द्रले टिकटकमा यस्तो गरेपछि भिडियो बन्यो भाई’रल (हेर्नुस् भिडियो) – live 60media
नायिका श्वेता र विजयन्द्रले टिकटकमा यस्तो गरेपछि भिडियो बन्यो भाई’रल (हेर्नुस् भिडियो)
सिन्धुपाल्चोकमा माझी’बस्ती निर्मण गरिसकेी श्वेताले विजयेन्द्रसँग धुमधा’मसँग नेपालको सबैभ’न्दा महंगो ५ तारे होट’ल गोकर्ण रिर्सोटमा धुमधामले गरिन् । श्वेताले करो’डौँ खर्च गरेर गरिन् । श्वेता र विजयेन्द्रको विबाह १ करोडको हाराहा’रीमा खर्च भएको बताइन्छ । ३ दिनसम्म चलेको वि’बाह नेपाली चलचित्र उद्यो’गकै सर्वाधिक महंगो बिहे भए’को बताइन्छ ।
जुन विबा’हलाई अहिलेसम्मको भव्य विबाह भएको समेत बताइन्छ । धुमधामले वि’बाह सकिए लगत्तै श्वेता पनि विजये’न्द्रका साथ परिवारका सबै सदस्यहरुसँग अन्त’रवार्तामा देखिएकी छिन् । एक युट्युवसँगको कुराका’नीका क्रममा श्वेतालाई उनकी सासुले श्वेतालाई बुहारीको रुपमा नभई छोरीको रुपमा स्विका’रेको बताएकी छिन् ।
श्वेताकी सासुले श्वेता आफ्नो कान्छो छो’राको पेमि’काका रुपमा घरमा आए’का कारण श्वता बु’हारीका रुपमा भित्रिए पनि आफ्नो छोरी नभएका कारण पनि श्वेतालाई छोरीकै ब्य’बहार गर्ने उ’नले बताइन् । सो अवसरमा श्वे’ताका ससु्राले श्वतेता’लाई बुहारीको रुपमा स्विकार्न पाउँदा आँफुह’रुको छाती पनि चौडा भएको बताए ।
त्यस्तै श्वेताका जेठाजु दिपेन सिंह रावतले श्वेतालाई बुहा’रीको रुपमा स्वि’कार्न पाउँदा निकै खुशी लागेको बताए । त्यस्तै श्वेताका पति विजयेन्द्र सिंह रा’वतले आँफुले श्वेता’लाई प्रस्ताव राखेको र श्वेता’ले आफ्नो परिवारको नाम अझै उज्जल बनाउन भूमिका खेलेको बताए ।
श्वेताकी सासुले सु’जातालाई हुनेवाला जेठी बुहारी भनेर परिचय गराइन् । सुजाताले औपचारिक रुपमा विबाह नगरेको भए’तापनि परिवारले भने स्विकारि सकेको छ । फिल्म कहाँ भेटिए’लाबाट नेपाली चल’चित्रमा डेब्यू गरेकी नायिका श्वेता खड्काले करोडपति ब्यबसायीका छोरा विजयेन्द्रसँग धुमधामले विबाह गरेसँगै अहिले उनी समा’चार र युट्युवमा ट्रेण्डिगंमा छिन् ।
श्वेताका हरेक गति’बिधिले चर्चा पाइर’हेका बेला श्वेता पतिसहित विभिन्न अन्तरवार्तामा देखा परेका छन् । श्वेता विबाहपछि अहिले पारिवारिक भेट’घाट र मन्दिर भ्रमण र दर्शमा पनि ब्य’स्त छिन् । त्यस्तै नवविवाहित स्वेताले आफ्नो रमाइलो पल हरुलाई टिक टक को मार्फत बात आम सुभ चिन्तक र दर्शक माझ पुर्याइरहेको छिन् । श्वेता र विजयन्द्र को पछिल्लो यो भिडियो हेर्नुहोस
← पुरा हुँदै सचिन परियारको पढ्ने सपना : ईन्दे्रणीले १२ कक्षासम्म निशुल्क पढाउने !
गरेको काम बिग्रने र असफल हुने भएको छ ? यसो गर्नुहोस् कहिले असफल हुनु पर्दैन ! →